Top 20 Android Bluetooth Games in hab multiplayer r
Top 20 Android Bluetooth Games ee multiplayer Mode
Dadka qaarkood waxa ay raadinayaan tallaabo multiplayer in ka dhici karaa wakhti kasta iyo meel kasta oo aan in la gaarin in ay internetka ku xirmaan. Isticmaalka tiknoolajiga la yidhaa Bluetooth, kulan badan Android doonayaan in ay samatabbixin kaliya in, kulan multiplayer tayo sare leh oo la ciyaaray karaa guud ahaan Bluetooth la jidhkiinna qol. Laakiin waxaa jira dad badan kulan Android Bluetooth, iyo sida technology uu noqdo sii kordheysa oo caan, kulan ee heerar kala duwan oo tayo leh u kobcay iyo suuqa daadadku. Hadda macaamiisha caqli leh sameeya lacag kaash ah ma masaakiin ah Missile nidaamka ciyaar aan xitaa isku dayay, taas ayaa keentay in inta badan ee kulan bedesheen daydo ganacsiga ay ka mushahar-ka-ciyaar si micro-macaamil xawaalad ama lacag la'aan ah ilaa albab ciyaaro kulan kula-app iibsadaan. Waxaan ka dhigi wax dadaal ah si ay u kala soocaan kuwa laba qaab ganacsi halkan. Halkii ayaan ahay oo diiradda saaraya ugu wanaagsan ee Android multiplayer kulan la muuqaalada Bluetooth ku salaysan kaliya content ee ciyaarta.
1. Minecraft: Pocket Isugeyn
Minecraft waa mid ka mid ah kulamada ugu iibinta ee waqtiga oo dhan. Kulankaan waa farxad inaan u ciyaaro mid ka mid ah ugu wanaagsan kulan Android Bluetooth, iyadoo xoriyad u badan inuu u ciyaaro si kastaba ha ahaatee aad rabto. Ilaa Team? Sure! Midba midka kale dilo? Aynu u samayn! Tani waa hubaal oo dhan-time aan ciyaarta jecel. Mushaharka ugu $6.99 oo wuxuu ku raaxaysan xiiso lahayn oo!
2. Counter Srike: qaadan karo
Counter Strike ayaa hit ah suuqa PC wakhti dheer qaar ka mid ah. Laakiin waxaa dheer si aad ee kooxda kaliya ee ku darayaa in shidaal dabka dhaxalgal ah ciyaaraha guul. Kulankaan Android Bluetooth waxay keentaa istaraatijiyad biqil-em-up cabsi badan suuqa mobile in ay noqon kartaa madadaalo fudud saaxiibada ama xataa cadaawayaashiisa online!
Taasi waa xaq, chess ka dhigtay in ay kor u sare liiskan. Tani waa horrayn, maxaa yeelay chess waa ciyaar fiican u isticmaali technology Android Bluetooth inuu keeno mid ka mid ah keenay aduunka ee ciyaarta ugu da'da weyn da'da cusub. Sidoo kale, haddii aad rabto kulan istaraatijiyad waxaa fiican in aad adiga bartaan ciyaarta ugu istiraatiiji ah oo ku saabsan suuqa!
Kulan Racing ay buux dhaafiyeen suuqyadii ciyaarta Android Bluetooth, laakiin nasiib wanaag waxaa jira waxyaabo badan oo ah kuwa aad u fiican. Haddii aad rabto in aad tartanka-octane sare leh baabuurta qurux iyo muuqaal leh fursado badan fiican oo giraangiraha aad, hubi Asphalt 7 Oo ay haa tahay, Asphalt 8 maqan yahay, laakiin ilaa intay ka ciyaarta in wareegsan, Asphalt 7 weli aan jeclaa.
5. dhimanaya Kombat X
Daacadnimadii, mararka qaarkood kaliya aad u baahan inay bludgeon qof galay saxarka ah xuub. Dhimanaya Kombat ayaa keenay ee kooxda caanka ah suuqa mobile guul weyn. Kulankaan waa kaamil u fadhiya saaxiib iyo jabiyo kasta oo kale waa in la dilaa ka badan network Bluetooth.
6. Modern dagaalanka 3: Waxaa dhacday Nation
Dagaalka Modern soo baxa la kulan soo jiidasho leh si degdeg ah. Version Tani dhab ahaantii ku xayiran ila, si kastaba ha ahaatee. Gameplay ahaa si fiican u fekrado iyo casriyaynta ahaayeen kuwo ka badan oo suurtogal ah si ay u gaaraan wadada free socda halka kulan kale oo run ahaantii aad ku xumayso iska galay samaynta kuwa iibsiga ee-app. Style Fun oo wanaagsan saacado dheer oo xiiso leh.
Hadda Jooji iyo isku day kulankaan. Just u sameeyaan. Uma baahnid in aad in aad ogaato wax ku saabsan. Waa lacag la'aan ah in ay isku dayaan iyo ka dib aad ii mahad doonaa. Kulan kani ma aha mid aan style caadiga ah ee ciyaarta, laakiin waxay lahayd ii daqar!
Haa, waxaan ahay taageere kubada kolayga ah, laakiin in uu leexan, waxa run ahaantii waa adag tahay inay helaan wax kasta oo ciyaar ciyaaraha hufan on suuqa mobile, iskaba daa suuqa ciyaarta Android Bluetooth. Laakiin NBA Jam iyada oo la yimid ciyaar weyn. Graphics waa mid aad u fiican suuqa mobile iyo saakay ay tahay mid ka badan playable telefoonka mobile. Haddii aad jeclaan basketball oo dhan, tani waa wadada si ay u tagaan suuqa mobile.
Tani waa mid ka mid ah kulan fiican ee suuqa ciyaarta Android Bluetooth. Waa Shooter meel la gameplay runtii cajiib ah iyo muuqaallo kale ah. Style howlgalka waa seemless oo run ahaantii aad waayi kartaa wakhtiga ula socoto on this mid ka mid ah!
Runtii waxaan jeclaa 2011 iyo 2012 Waxaan u maleeyay in xarafka hore guusha waxaa ka mid ah oo la keenay kulan weyn. Gameplay waa u fududahay inay ka adkaadaan iyo naqshadeynta waa fiican ee suuqa. Waxaa laga yaabaa in la jirrabay in aad isku daydo version 2013, laakiinse anigu waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad marka hore isku day this mid ka mid ah, waxaad arki doontaa in 2013-ka maqan gameplay ku dareen leh oo aan xuduud lahayn oo ay ka horreeyay.
Waxaan wax fikrad ah kama waxa snooker ahaa ilaa kulankaan. Haddii aad qabto wax fikrad ah kama midkood, download it anyways oo isku day. Waa la yaabka xiiso leh, gaar ahaan saaxiibada.
Suuqa ciyaarta Android Bluetooth u baahan yahay kulan sidaan oo kale ah. Just cayriin, ficillo fun. Waa xiiso leh in uu socdaa. Dad badan oo kulan dagaal waayi karaa ay bixisa kulan yar ka dib, laakiin kulankaan, iyadoo baakadaha ay ayna adag, ka dhigaysa saacado badan oo xiiso leh Solo ama saaxiibada fudud in la sameeyo.
13. Gooryaanka 2: Armageddoon
Ma dhihi doonaa sida jir ayaan ahay, laakiin kulankaan ayaa soo celiyo xusuus. Maxaad Gooryaanka kuwaas oo doonaya inay dilaan midba midka kale? Bal yaa og? Laakiin waxaan u jeclahay! Aniga ahaan, waa inaan ciyaaro kulankaan saaxiibada. Waxaa dhab ahaantii ma aha xiiso Solo badan ee ii. Laakiin in uu noqon karaa muraaqooda waxaa ka mid ah.
14. iska haysto millionaire
Waxaan qaatay qaar ka mid ah duulimaadyada dheer iyo wadada dheer safarada badan ee dadka aan isagana ka weyn. Tani waa qumman yahay xaaladaha kuwa. Monoboli waa run ahaantii kulan qof walba. Ha u ogolaan score hoose idin khiyaanayn, kulankaan waa qumman yahay suuqa Android Bluetooth ah maxaa yeelay waxa ay ka codsadeen dad badan oo balaadhan.
15. GT Racing 2: The Experience Real Car
Haa, ciyaarta tartanka kale. Laakiin taasi mid sii yara safarka ku dhisneyd laftiisa diiradda. Racing, dabcan, waa arrin aad u weyn. Laakiin dhab ahaantii fiican oo aad gaari u wadada la faaidaysan qabow iyo casriyaynta bahal waa kulankaan waxa oo dhan ku saabsan. Waxaan jeclahay inaan xidhi ilaa saaxiibbadayda la arko iyo sida carwooyinka kortaan Stoke Begovic uu ka horyimid.
16. ergooyinka oo Halis ah Swat
Waxaad og tihiin, anigu waxaan ahay nin nooca shaqada weyn oo aan jeclahay in ay awoodaan in wada-op la saaxiibada iyo wax dhacaan. Tani waa mid ka mid ah kuwa kulan halkaas oo saaxiibada aad kula shaqeyn karaan in ay dhex heer oo aanay u toogtay aad at!
Pool inta mid ka mid ah kulamada ugu multiplayer suuqa. Kulankaan ayaa run ahaantii waa qumman yahay suuqa Android Bluetooth sida aad ka ciyaari kara qaar ka mid ah kulan deg deg ah ka hor kulan la booskaas ka ah, ama WidhWidh tartanka dhowr saaxiibada.
Si ka duwan dhimanaya Kombat ka kor ku xusan, Tekken runtii diiradda saarayaa kala duwanaanta dabeecadda iyo toban kun ah oo saakay dagaal u gaar ah. Waxaan jeclaan Tekken ee dhaqaaqdo qabow iyo jilayaasha weyn. My saaxiib jecel yahay kulankaan ka badan dhimanaya Kombat, laakiin, oo daacad ah, waxaan ahay jeclaan labadoodaba.
Kubadaha si xiiso leh derbi la kulankaan ka. Waa tallaabo ka buuxaan oo Diinna deg deg ah. Waa mid ka mid ah kuwa kulan halkaas oo aad u guuxi doonaan iyo qaylin oo ku qosli saaxiibadaa macno ahaan waqti isku mid ah iyo neefta isku.
Checkers waa checkers; haddii aadan aqoon sida aad markaas u ciyaaro aad baran doontaa in laba daqiiqo. U bood gogo 'ay, aad u badbaadiso iyo aad u hesho dhanka kale. Mid ka mid ah la soo dhaafay taagnaa guul! Checkers sidoo kale waa kulan Android Bluetooth wanaagsan in aad isku dejiso leh. Ma dadaal badan, laakiin nooc ka mid ah oo xiiso leh in vegging baxay baahida.
> Resource > Emulator > Top 20 Android Bluetooth Games in hab multiplayer